Saraakiil Katirsan Melleteriga Turkiga Oo Gudaha Ugalay Gobolka Idlib Ee Waqooyiga Suuriya.
Monday October 09, 2017 - 07:29:36 in Wararka by Super Admin
Kumanaan katirsan melleteriga dowladda calmaaniga Turkiga ayaa wali kusii qulqulaya xuduud beenaad ay wadaagaan wadamada suuriya iyo Turkiya waxaana lahadal hayaan xaalad colaadeed dhammaan waqooyiga wadankaasi.
Markii ugu horraysay saraakiil melleteri iyo khubaro dhanka ammaanka ah oo ka socda xukuumadda Ankara ayaa gaaray gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan xoogag islaami ah iyo kuwa mucaaradka dhax dhaxaadka loogu yeero.
Wafdiga oo si toos ah uu dhaq dhaqaaqiisa ula socda madaxweynaha Turkiga waxay ka gudbeen degmada Admah ee xuduud beenaadka dhacda waxaana gelibinayay xoogag katirsan mucaaradka.
Muuqaal lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinayay saraakiisha Turkiga oo lagu gelbinayo gaadiid ay dul saaranyihiin xoogag islaami ah waxayna si nabad gelya ah ugaareen halkaasi ay usocdeen.
Taliyaha ciidanka Turkiga ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ay direen saraakiil sahan ah islamarkaana waqti dhow ay howlgal melleteri ka bilaabayaan gobolka idlib.
Baraha bulshadu ku kulanto ayay ragga firfircoon ee soo tabiya kacdoonka suuriya si aad ah iskula dhax qaadayeen isbedelka degdegga ah ee ka dhaqan galay gobolka idlib iyo sida xoogag islaami ah oo diidanaa faragelin melleteri si lama filaan ah ugusoo dhaweeyay saraakiisha Turkiga ee horudhaca u ah duullaanka loo qorshaynayo waqooyiga suuriya.
Madaxweynaha Turkiga Erdogaan ayaa isna kalimad uu jeediyay ku sheegay in dowladdiisa iyo Ruushka ay si isku mid ah waqooyiga Suuriya ugula dagaallamayaan wax uu ugu yeeray ‘Argagaxisada’.
Goob Joogayaal ku sugan xuduudda ay wadaagaan labada dal ayaa sheegay in ay arkeen gaadiid gaashaaman oo melleteriga Turkiga uu xuduudda kusoo daabulayo.
Sidoo kale wakaaladda Wararka Turkiga ayaa faafisay sawirro muujinayay gaadiid gaashaaman oo xuduudda lagu diyaarinayo xilli habeen ah balse illaa iyo hadda melleteriga Turkiga duullaanka si toos ah uma qaadin waxaana lafilayaa in uu gobolka Idlib ugelbiyo 1,500 maleeshiyaad mucaarad ah.
Faragelinta Dowladda Turkiga la damacsantahay Gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya ayaa laga cabsi qabaa in waji cusub u yeelo dagaalka todobo sana Jirsaday ee ka holcaya Suuriya.